La Hadlida Shaqaalaha Kula Shaqeeya - SEIU6
La Hadlida Shaqaalaha Kula Shaqeeya
SEIU: QODDOBO KOOBAN
Waa kuwan qaar ka mid ah xaqiiqooyinka SEIU oo laga yaabo inaad rabto inaad u sheegto xubnaha cusub.
SEIU waxaa 1921-ki aasaasey tiro yar oo ka mid ah nadiifiyeyaasha soogalootiga ah. Maanta waa midowga hadda ugu wayn ka mid ah ee Change to Win Federation (Hay’adda Isku’tagga Midowyada Shaqaalaha) iyo kan ugu koritaanka badan Waqooyiga Maraykanka, oo leh in ka badan 2 milyan oo xubnood.
Xarunta dhexce ee SEIU waxay ku taalaa Washington, D.C. Xubnaha waxaa lagu abaabulaa ilaa 300 oo ah laanta midowga ee deegaamada guud ahaan qaaradda oo dhan ah. SEIU waxay qayb ka tahay Hay’adda Isku’tagga Midowyada Shaqaalaha (Change to Win Federation) (CtW) iyo Hay’adda Ururada Shaqaalaha ee Canada (Canadian Labour Congress) (CLC).
Xubnaha SEIU ee kor u dhaafaya 2-da milyan waxay matalaan boqolaal shaqo oo kala duwan oo ay ku jiraan nadiifiyeyaasha, dhakhaatiirta, shaqaalaha dugsiga, shaqaalaha bulshada, kalkaaliyayaasha, injineerada, darawallada tagaasida, iyo shaqaalaha dawladda ee ku baahsan qaaradaha Mareykanka, Kanada, Alaska, Hawaii, iyo Puerto Rico. Waxaan nahay midowga kala duwanaanshah ugu badan leh meel kasta.
SEIU waa midowga ugu weyn ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo adeegyada dhismaha. Waa midowga labaad ee ugu weyn ee shaqaalaha dawladda
Xubnaha SEIU waxay heshiis la galeen 12,000 oo ah loo-shaqeeyeyaal kala duwan.
Kala badh xubnaha SEIU waa haween, in ka badan guud ahaan xoogga shaqaalaha guud ahaan. Ku dhawaad ​​saddex-meelood meel xubnaheena waxay ku nool yihiin qoysas labo qof ay ka shaqeeyaan.
In ka badan 40 boqolkiiba xubnaha SEIU waa dadka laga tirada badan yahay, marka la barbar dhigo 25 boqolkiiba xoogga shaqaalaha guud ahaan.
Boqolkiiba lixdan xubnaheena waa 40 jir ama ka wayn, taas oo naga dhigaysa in aanu ka weynnahay guud ahaan xoogga shaqaalaha.
Waxaa ka mid ah luqadaha looga hadlo laanta midowga ee deegaamada SEIU: Ingiriis, Isbaanish, Shiine, Kuuriyaan, Polish, Talyaani, Boortaqiis, Tagalog, Fiyatnaamiis, Carabi, Faransiis, Jabbaan, Creole, iyo Giriig. Kuwaasi waa uun qaar ka mid ah.
Inta badan xubnaha SEIU waxay ka shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn. New York (300,000), Los Angeles (205,000), iyo Chicago (90,000) ayaa ah kuwa ugu wayn.
Xubnaha SEIU ee ka badan 2 milyan, in ka badan kala bar waxay u shaqeeyaan federaalka, gobolka, ama dawladaha hoose.
Boqolaalka nooc ee shaqo ee ay matasho SEIU waxa loo qaybiyaa afar qaybood oo waaweyn: nidaamyada isbitaalka, shaqaalaha dawlada, adeegyada iyo ammaanka dhismaha, iyo daryeelka muddada dheer.
Shirwaynaha Wufuuda Caalamiga ah ee SEIU ee la qabto afartii sanaba ayaa maamulka ugu sareeya ee midowga. Wufuudda matalaysa xubin kasta oo SEIU ah waa inay ansixiyaan dhammaan go’aamada iyo qaanuunada midowga, oo ay ku jiraan kordhin kasta oo xaga khidmada ah.
Inta u dhaxaysa shirwaynaha, SEIU waxaa maamula madaxweyne Caalami ah, xoghayaha ahna khasnajiga, 14 madaxweyne ku-xigeen, afar madaxweyne ku xigeenka oo dhanka fulinta ah, iyo guddiga fulinta oo ka kooban 42 xubnood oo lagu doortay shirwaynaha. Taas aawadeed, xubnaha SEIU badankood waxay cod toos ah ku dhex leeyihiin guddiga fulinta ee SEIU.
Laanta midowga ee deegaamada SEIU waxay leeyihiin madax-banaani ka badan midowyada badankood. Xubnaha laanta midowga ee deegaamada waxay doortaan saraakiishooda, waxay qoraan dastuurkooda iyo xeer-hoosaadkooda, waxayna ka wada-xaajoodaan heshiisyadooda gaarka ah. Xubnaha laanta midowga ee deegaamada waa inay ogolaadaan mudaharaad kasta oo shaqo joojin si waafaqsan qaanuunkooda iyo habraacyadooda dejisan.
In ka yar boqolkiiba labo heshiisyada shaqada ee SEIU ayaa ku lug leh mudaharaad shaqo joojin.
SHARAXAADA KHIDMADAHA XUBINNIMADA
Khidmadaha xubinnimada waa mowduuc xasaasi ah midow kasta. Marka wakhtiyada adag lagu jiro, kharash kasta ayaa u ekaan kara mid ku culus shaqaalaha.
Wakiilada qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in arrinta lagu qaboojiyo in marka hore lagacaha lagu dalaco shaqaale cusub. Waxay sharaxaan sida ay khidmadaha xubinnimada maalgashi fiican u yihiin baddelki loo arki lahaa kharash dhib badan.
1. Marka lagu soo tago mushaharo badan, shaqaalaha midowga waxay ku raaxaystaan ​​caymis caafimaad, hawlgab, badqabka iyo caafimaadka shaqada, iyo ammaanka shaqada oo ka wanaagsan marka loo eego shaqaalaha aan abaabulnayn.
2. In ka badan shaqaalaha aan abaabulnayn, shaqaalaha midowga waxay ku helaan xaqsoor, xuquuq, sharaf, iyo ixtiraam shaqada.
3. SEIU ma dejiso khidmadaha xubinnimada. Kaliya wufuuda Shirwaynaha Caalamiga ah ee SEIU, ee matala xubnaha, ayaa u codayn kara inay kordhiyaan khidmadaha xubinnimada. Laamaha midowga ee deegaamada ayaa sidoo kale u codayn kara inay kordhiyaan khidmadaha xubinnimada.
Maxaa khidmadaha xubinnimada loo isticmaalaa? Waxyaabo badan oo badan.
U gorgortanka heshiisyada waxay u baahan yihiin falanqeeyayaasha cilmi baarista, gorgortamayaal, wakiilada midowga, iyo shaqaalaha deegaanka oo abaabula isu soo baxyada, falalka goobta shaqada, iyo war saxafadeedyada.
Difaacida xubnaha iyo fulinta heshiisyada waxay u baahan yihiin lacag si loogu heli kaalmo sharciyeed iyo sidoo kale kharashyada cabashooyinka iyo dhexdhexaadinta.
Ku guuleysiga sharciga iyo adeegyada dawlada ee sare loo qaaday iyada oo lagu gaarayo ololeyn, cilmi baaris, iyo ka marag furka heer degmo, gobol, iyo heer federaal.
Abaabulida xubnaha cusub si kor loogu qaado mushaharka iyo dheefaha goobaha shaqada ee lagu tartamayo si markaas mushaharkeena iyo dheefaheena gaarka ah aysan u baabi’in ama dad kale oo dibadda ah aan qandaraas loogu siinin.
Barnaamijyada badqabka iyo caafimaadka shaqada. SEIU waxay aqoonsi qaran ku heshay shaqada ay ka qabatay macdanta asbestos-ka, cudurada ku dhasha dhiiga, iyo khataraha kale ee goobta shaqada.
Waxbarashada iyo daabacaadaha barnaamijyada midowga ee nooc kasta ah, oo ay ku jiraan wargeysyada, ololaha warbaahinta, xidhiidhka dadwaynaha, iyo sahanada ra’yi ururinta.
Mudahaaradka shaqo joojinta, daryeelka, difaaca, iyo lacagaha kale ee shaqaalaha.
Kirada xafiisyada, safarka, saadka, iyo maamulka.
Taageerada barnaamijyada xuquuqaha madaniga iyo kuwa aadanaha, fursadaha loo siman yahay, xubnaha wawayn, iyo abaabulka.
Xubinnimada Hay’adda Isku’tagga Midowyada Shaqaalaha (Change to Win Federation) iyo Hay’adda Ururada Shaqaalaha ee Canada (Canadian Labour Congress) sidoo kale ururada iyo golayaasha shaqaalaha ee gobolada iyo degmooyinka.
Qorshaha Midnimada Awoodda Cusub
Sanadka 1999-kii Madaxweynaha Caalamiga ah Andrew L. Stern ayaa magacaabay guddi gaar ah si ay u eegaan caqabadaha xubnaha SEIU iyo qoysaskooda ay la kulmaan maadaana la sii galayay qarni cusub. Iyada oo ku saleysan falanqaynta awoodda sii kordheysay ee shirkadaha iyo saameynta ay ku lahaayeen siyaasiyiinta, Guddiga Madaxweynaha ee 2000 ayaa ku taliyay in la qaato qorshaha Midnimo kaas oo u dhisi doona awood cusub qoysaska shaqeeya. Qorshahan waxa ka mid ahaa toddobada qaybood ee soo socda:
Dhisidda awood iyada oo loo adeegsanayo midnimada xubinnimada oo ay ku jirto ballaarinta ka qaybgalka xubinnimada iyo sare u qaadida balaaran ee wada xiriirka iyo waxbarashada midowga.
Iskudubarid cusub oo ka dhaxeeya laamaha midowga deegaamada ee SEIU kuwaas oo ka wada shaqayn doona si ay sare ugu qaadaan xeeladaha shirkadda oo ay qayb ka mid ah dhaqaalahooda ugu ururiyaan Sanduuqa Midnimada ee qaranka ee xeeladaha wadajirka ah iyo taageerada wadajirka ah.
Abuurista isla xisaabtanka midba midka kale iyada oo loo marayo dejinta wadajirka ah ee heerarka waxqabadka sare.
Midaynta dhammaan shaqaalaha qabta shaqada isku nooc ah iyada oo shaqaale badan lagu soo darayo midowga kuwaas oo ka wada shaqeeya hal shirkad ama qabta shaqo isku mid ah. Waxaan sidoo kale bilaabi doonaa dadaal ballaaran si aan cadaadis ugu saarno loo shaqeeyayaasha inaysan faragelin xorriyadda shaqaalaha si ay ugu doortaan qof u hadla goobta shaqada iyaga oo samaysana midow.
In siyaasiyiinta lagula xisaabtamo arrimaha muhiimka u ah dadka shaqeeya iyada oo la fulinayo barnaamij sanadka oo dhan socda si xubnaha looga qayb geliyo sidii saraakiisha dawladu ay u dhageysan lahaayeen qoysaska shaqeeya.
Isticmaalka badan ee tignoolajiyada oo uu ku jiro internetka.
Uruurinta dhaqaalo lagu dhiso awood cusub iyada oo loo marayo qaab dhismeedka khidmada xubinnimo oo keenta dhaqaalaha lagama maarmaanka u ah in guuleysto.
Qorshaha Midnimada Awoodda Cusub waxaa ansixiyay wufuuda midowyada deegaamada ee ka qaygalay Shirka SEIU ee Sanadka 2000.
Warbixinnada maaliyadeed ee SEIU ayaa loo daabacaa si joogto ah iyaga oo muujinaya halka shilin kasta oo dakhliga ka mid ah loo isticmaalay. Waxaad ka eegi kartaa saraakiishaada wixii faahfaahin ah ee ku saabsan maalgelinta iyo kharashyada midowga deegaankaaga gaarka ah.
FAA’IIDO NOOCEE AH AYUU MIDOWGU LEEYAHAY?
Wakiil ahaan, waa shaqadaada inaad ka gado faa’iidooyinka xubinnimada midowga shaqaalaha aan abaabulnayn. Wax dhib ahna ma lahan inaan xasuusino xubnaheena gaarka ah xili kasta, sidoo kale. Waa kuwan (iyaga oo kooban) sideed faa’iidoyin oo wawayn oo ay midowgu u leeyihiin goobta shaqada:
Ururka Midow La’aan
Mushaharada, dheefaha, xaaladaha shaqada Waxaa ilaaliya heshiiska sharciga ah. Waxay ku xiran yihiin go’aanka maamulka.
Mushaarada Waxay ku qoran yihiin heshiiska. Waa sir. Waa shaqsi ahaan kaala gogortamayo maamulka.
Mushahar Kordhinta Waxaa loogu gorgortamaa qof walba. Dhamaan shaqaalaha waxay u codeeyaan xalka. Eexasho ayaa lagu go’aamin karaa mushahar kordhinta shaqsiyeed.
Edbinta Midowga ayaa ku difaaci doona. Nasiib badan. Adiga iyo nasiibkaaga.
Abaalmarinada Waxaa lagu bixiyaa si caddaalad ah iyada oo la raacayo heshiiska lagu gogortamay. Eex, jaceyl, baad, magacaab adiga.
Fasaxyada, nisaska shaqada, shaqo tirista Waxaa lagu saleeyaa heshiiska lagu gorgortamay. Kuwa kore eeg.
Dhibaatooyinka Midowga ayaa ka shaqayn doona goobta si uu u xaliyo. Si kasta sida ay ayaga rabaan.
In ay dadka cod ka dhiibtaan saaxadda siyaasadda Waxay ka shaqeeyaan sharciyadda ilaaliya dhammaan dadka shaqeeya iyo qoysaskooda. Waxay baabi’iyaan ama daciifiyaan sharciyadda ilaaliya shaqaalaha, tusaale., caafimaad iyo badqab, lacagaha saacadaha dheeraadka ah, iwm.